Imikhuba Emihle Yokuhlelwa Okufanele Kokuthunyelwe Komphakathi Komphakathi | Martech Zone
ULwesibili, May 15, 2018 NgoLwesine, Februwari 25, 2021 UNate Gadzhibalaev
Ukuhlela okuthunyelwe kwakho kwezokuxhumana kufanele kube yingxenye ebalulekile yecebo lakho lokumaketha imidiya yokuxhumana nabantu, futhi ngokungadingeki ukusho, kunezinzuzo eziningi. Ngaphandle kokuthi ungacabangi ngokuthumela kuzinkundla zokuxhumana eziningana izikhathi eziningi ngosuku, uzogcina neshejuli elingaguquguquki, uhlele okuqukethwe okuzwela isikhathi, futhi ube nesilinganiso sokwabelana esinempilo njengoba ukwazi ukuhlela kusengaphambili.
Esikhundleni sokuba sezinkundleni zokuxhumana ngaso sonke isikhathi nsuku zonke, ukuhlela kukusongela isikhathi esibalulekile ongasisebenzisela ukukhulisa ibhizinisi lakho. Uma ungazi ukuthi uzoqala ngaphi, sizokunikeza izindlela ezinhle kakhulu zokuhlela kahle okuthunyelwe kwakho kwezokuxhumana.
Thumela ngezikhathi eziPhelele
Ngenxa yama-algorithms aguqukayo kumapulatifomu wezokuxhumana ahlukahlukene, ukuthumela ngezikhathi ezinhle kuma-akhawunti wakho wezokuxhumana kubalulekile uma ufuna ukuthi okuthunyelwe kwakho kubonwe ngabantu abaningi ngangokunokwenzeka. Njengoba inani labasebenzisi bezinkundla zokuxhumana likhula nsukuzonke, ukuphakelwa kwezindaba zezinkundla zokuxhumana akukaze kusuke ngokushesha okukhulu.
Imininingwane nokuhlaziya kuyindlela eyodwa yokuthi uthole ukuthi iziphi izikhathi ezihamba phambili. Mane ubuke lapho izithameli zakho zisebenza kakhulu ku-inthanethi bese uzithumela ngalezo zikhathi. Lokho kushiwo, uma ufuna ukuba nokuqonda okuqonde ngokwengeziwe, ungasebenzisa ithuluzi lokuhlela imithombo yezokuxhumana. Lezi zinhlobo zamathuluzi zizokunikeza izikhathi ezifanele zokuposa isikhathi ngasinye ngoba zisebenzisa i-algorithm ukuze zinqume izikhathi ezihamba phambili.
Ngabe ulwela ukuhambisana nokuphatha ama-akhawunti angaphezu kweyodwa wezokuxhumana? Bheka lo mhlahlandlela obanzi ku- ukuphatha kanjani ama-akhawunti amaningi wezokuxhumana bese ubona ukuthi yimiphi imikhuba emihle kakhulu.
Lungiselela Imvamisa Yakho Yokuthumela - Yazi Ukuthumela Kaningi Kangakanani
"Kufanele ngithumele kangaki ku-akhawunti yami ye-Facebook / Twitter / Instagram?" ungomunye wemibuzo evame ukubuzwa uma kukhulunywa ngecebo lokuqukethwe kwezokuxhumana. Ngeshwa, ayikho inombolo yegolide esebenza kunoma iyiphi inkundla yezokuxhumana. Ngemuva kwakho konke, ipulatifomu ngayinye isebenza ngokuhlukile, kepha zonke izethameli nazo zehlukile, ngakho-ke bazoba nezidingo ezihlukile nokulindelwe.
Yinye into eqinisekile - ukuthumela kaningi ngeke kwenyuse ukufinyelela kwakho noma kukhulise izithameli zakho ngokushesha okukhulu. Ngokuphambene nalokho, i-akhawunti yakho ingahle ibonakale njengogaxekile, ngakho-ke empeleni ungalahlekelwa abalandeli abangahle babe khona.
Enye indlela yokuthola ukuthi kufanele uthumele kangaki kungxenyekazi ngayinye yezokuxhumana kungokuzama. NgoMsombuluko, ake sithi, ungathumela iposi elilodwa. Bese kuthi ngoLwesibili andise isibalo sibe yizikhala ezimbili, ngoLwesithathu sibe sesithathu, njalo njalo. Esontweni elilandelayo hlola imininingwane yakho noma ama-analytics bese uqhathanisa.
Kukhona indlela elula yokuthola ukuthi iyiphi inombolo elungile, futhi lokho kungenziwa nangethuluzi lokuhlela imithombo yezokuxhumana. Lokhu kuyashiwo, ake sikunikeze ezinye izincomo uma kukhulunywa ngemvamisa yakho yokuthumela.
I-Facebook, 1 - 2 izikhathi ngosuku.
I-Twitter, izikhathi ezi-3 - 5+ ngosuku.
I-Instagram, izikhathi ezi-1 - 2 ngosuku.
I-LinkedIn, izikhathi ezimbili ngosuku.
I-Pinterest - izikhathi ezingu-5 + ngosuku.
I-Google +, izikhathi ezi-1- 3 ngosuku.
Setha Isheduli Yokuthumela Yokuthunyelwe Okuhlala Kuhlaza
Ukuba khona njalo ezinkundleni zokuxhumana akuyona into elula; ngemuva kwakho konke, kufanele uqhubeke nokuhlinzeka ngokuqukethwe kubalandeli bakho kuzingxenyekazi ezahlukahlukene. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi okuthunyelwe ngakunye kufanele kushicilelwe kanye kuphela. Ngokuphambene nalokho, okunye okuthunyelwe kuhlala kufanelekile isikhathi eside ngenkathi kuhlala kunesithakazelo kuzithameli zakho. Ukuthumela kabusha okuqukethwe okuhlala kuluhlaza kuyindlela enhle yokunikeza izethameli zakho lokho ezikufunayo ngenkathi unika inani isu lakho lokumaketha okuqukethwe. Ngakho-ke, wazi kanjani ukuthi ikuphi okuthunyelwe okuhlala kuluhlaza futhi kufanele ukuphinde ukubathumele kangaki?
Okuthunyelwe kwe-evergreen kubhekwa njengalokho okuthunyelwe okungazweli esikhathini futhi kunikeze inani isikhathi eside. Enye indlela yokuthola ukuthi yikuphi okuthunyelwe kwakho okuhlala kuluhlaza ukusesha ngesandla kokuphakelayo kwakho ngokuya ngokuqukethwe nenombolo yokuthandwa namazwana abekiwe. Ngemuva kwalokho hlela ngesandla ngamunye ngenkathi usesha izikhathi ezinhle kakhulu zokuposa.
Enye indlela ukuthi uyiqagele, ngokusebenzisa ithuluzi lokuhlela. Amanye ala mathuluzi awakwazi ukukusiza ekutholeni nje lokho okuthunyelwe okuthandwa kakhulu, ukuphawula, nokwabelana, kepha futhi uwahlele ngezikhathi ezifanele zokuthumela kuma-akhawunti amaningi wezokuxhumana.
Sebenzisa Amathuluzi Wokuhlela Komphakathi
Lapho sikhuluma ngokuthumela ngezikhathi ezifanele, ukwandisa imvamisa yakho yokuthumela, kanye nokuhlela okuqukethwe kwakho okuhlala kuluhlaza, sishilo ukuthi ngokusebenzisa amathuluzi wokuhlela imithombo yezokuxhumana ngeke nje usebenze kahle, kepha uzonga nesikhathi esibalulekile. Kunamathuluzi amaningi wokuhlela ezokuxhum ongakhetha kuwo, kepha iningi linikela ngezici ezimbili ezifanayo. Eyokuqala, ngokusobala ukuhlela okuthunyelwe kwakho hhayi okukodwa kuphela kepha kuma-akhawunti amaningi wezokuxhumana. Owesibili yi-analytics edingeka kakhulu engakusiza ukuthi wazi izithameli zakho futhi uthuthukise isu lakho lokuqukethwe.
Kulesi sikhathi esiphila kuso, cishe alikho ibhizinisi lesimanje elingasebenza ngaphandle kokubakhona kokungenani eyodwa, uma kungenjalo amapulatifomu ezokuxhumana. Kungakho ukuhlela kubaluleke kakhulu uma ufuna ukuba nesikhathi sokwenza ezinye izinto ukukhulisa ibhizinisi lakho esikhundleni sokuba sefonini yakho uthumele ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, khetha ithuluzi lokuhlela elifana ne- Amplifr futhi ubheke ukuthi impilo yakho iba lula kangakani ngenkathi ibhizinisi lakho likhula!
Tags: isikhulisiisikhathi esihleokuthunyelwe okuhlala njaloukuthumela imvamisaokuthunyelwe okuhleliweimvamisa yezokuxhumanaukuhlela ezokuxhum
UNate ungumsunguli we Amplifr, insiza esiza abantu namabhizinisi ngokuhlela ngokuzenzakalela okuthunyelwe kwabo ezinkundleni zokuxhumana, kubasize bathole imali eningi. Ngemvelaphi yokuphathwa komkhiqizo, ukuthuthukiswa kwebhizinisi, nokukhula kwamazwe omhlaba, uhlose ukusiza abantu ngabanye namabhizinisi ngokubakhombisa ukuthi bangaqhubeka kanjani nokukhulisa ababukeli babo ngenzuzo nangendlela efanele.
Ingabe Ungumxhumanisi Wezokuxhumana Ngempela Ngempela?